Baasaboorkaaga taariikh dhalasho kuma qorna?
Annaga ayaa kaa caawineyna in XXX/XXX ama 00-00 lagu baddalo taariikhda saxda ah.
Taariikh dhalasho la’aan
Nederland waxaa ku nool dad ka badan 78.000 oo assalkoodu dhalasho ahaan Nederlandeys ahayn oo baasaboorkuuda taariikh dhalasho lahayn. Baasaboorka waxaa ku qoran oo kaliya sanadka dhalashada meeshii maalinta iyo bisha waxaa ku qoran ‘XX XXX/XXX’ ama ‘00-00’.
Taas waxay keeneysaa dhibaatooyin badan. Xafiiska canshuuraha (belastingdienst) iyo xafiiska lacagta ilmaha iyo hawlgabka laga bixiyo (Sociale Verzekeringsbank) labadaba macluumaadkaas kuma shaqayn karaan. Waxaa kaloo intaas dheer hay`adaha dibadda iyo safaaradaha intaba su’aalo dhib badan ayay arrintaan taariikhda malawaalkaa ka keenaan.
Tani waxay keeni kartaa saameyn xun oo ah in fiiso aad dalbatay ama lacagta cayrta ama lacagta hawlgabka si ku meelgaar ah lagaaga joojiyo ama ayada dhanba laguu diido.
Baddalidda taariikhda dhalashada
Xafiiska qareenada lagu magacaabo Advocatenbus ayaa wuxuu sameeyey qaab sahlan oo taariikhda saxda ah baasaboorka loogu muujin karo. Inta badan waxaa dhacda in qarashka arrintani dowladda kaa caawiso.
Dadka baasaboorkooda taariikh dhalasho lahayn waxay la soo xiriiri karaan xafiiska qareenada ee Advocatenbus si ay u helaan warbixin dheeraad ah iyo wadahadal isbarasho.
Goobta ballanta iyo wadahadalka
Cinwaanka ama adereyska
Ma qabtaa su'aalo ama tusaalooyin?
FADLAN CALAAMAD SAAR SPAMKA
This post is also available in: Dutch Arabic Dari